Waxaa jira laba qaybood oo kala duwan ee saamaynta ku Final Cut Pro X: saamaynta Isbatooraha iyo Saamaynta saamaynta Browser.
Waxaan hore u qoran oo ku saabsan sida loo isticmaalo saamaynta Isbatooraha si ay u abuuraan saamayn sawir-in-sawir , ka mid saamayn badan oo kale oo la heli karo noo ee Goo Final. In this article, waxaan doonayaa inaan idin ​​tuso sida loo codsado saamayn si clip ah, wax ka beddelo xaalkaas, ku meel gaar ah u noqon xaalkaas ama dibadda, ama waxaa gebi ahaanba tirtirto.
Raadi iyo codsan saamayn
Halkan waa clip - dhali kala horjeeda kulane.
Si aad u codsato saamayn, marka hore dooro clip ee Jadwalka ka.
Markaas, guji icon this ee Toolbar in la furo Browser Raadka (ama nooca Lauch + 5).
Browser, sida oo dhan daalacashada saamaynta, taxayaa qaybaha saamaynta bidixda, sanduuqa raadinta hoose ah si ay u isticmaalaan u raadinaya magacyada reer binu saamaynta, iyo saamaynta nooc kasta oo ku xaq.
Halkan, tusaale ahaan, waxaan xushay category qasayo ah, iyadoo aan dulqabo dhow saamaynta isku dari kara Gaussian. (Isku dari kara Gaussian waa saamaynta fiican in la isticmaalo marka aad rabto in aad clip ah si ay u eegaan tashwiish.)
Si aad u codsato saamayn, samayn mid ka mid ah laba shay:
Jiid saamaynta ka Browser eee clip aad rabto in aad beddesho.
Haddii clip, ama clips, waxaa lagu soo xulay, double-riix saamaynta ee Browser si aad u codsato.
U habeynta saamayn
Si aad wax ka beddelo saamayn, guji icon this ee Toolbar in la furo Isbatooraha (ama nooca Lauch + 4).
Riix tab Video ku Isbatooraha ah. Raadka ka Browser Raadka waxaa had iyo jeer ku qoran sare ee Isbatooraha ah.
Midhadh slider ah oo jiidin arki doonaa waxa dhaca. Tusaale ahaan, in la sameeyo sanam blurrier, jiidi slider Lacagta ay xaq u. Si aad u yarayn saamaynta, waxaa jiidi bidixda.
Disable iyo tirtirto saamayn
Si ku meel gaar ah gab saamayn, iyada oo aan wax la tirtiro, guji sanduuqa buluug ah si ay muuqato cawl.
Si aad u awood saamayn, guji sanduuqa cirro sidaas waxaa mar kale buluug ah.
Si aad u tirtirto saamayn, riix magaca saamaynta - tusaalahan: Gaussian - ka dibna riix furaha u tirtirto weyn.
Saamaynta laga tirtirayaa clip ee la doortay.
Credit dheeraad ah
Waxaad ka codsan kartaa, wax ka beddelo, xataa tirtirto saameyn la mid ah si ay u clips badan oo ay ugu horeysay doorashada oo dhan clips aad rabto in aad beddesho ee Jadwalka ka dibna ku daray, beddelin, ama la tirtiro saamayn ku Isbatooraha ah.
Habka dalbadasha saamaynta waa isku mid dhamaan saamaynta waxaad codsan ka Browser Saamaynta ay. In articles mustaqbalka, waxaana idin tusin doonaa sida loo isticmaalo farsamo si ay u abuuraan kala duwan oo saamayn kala duwan ee Final Cut Pro X.
> Resource > FCP > FCP X: Si aad u dar Raadka